Indlu Yezempi Yezempi (Yezempi) Abakhiqizi & Abahlinzeki - Ifektri yaseChina Yezempi Yezempi (Yezempi)
Indlu Yezokuvikela Nezempi (Inkambu Yezempi)
Prefabricated Ukwakhiwa K Model Camping Prefab Mo ...
Flat Pack Ukuphila Inani esandisekayo Steel ezithathekayo Pre ...
Supply High Qualtiy Office ephathekayo Prefabricated Fl ...
China eshibhile 20 40 FT elibizayo T Model House lishe laba ngumlotha Mod ...
Isingeniso Sekamu Labahlanganisiwe Labasebenzi
Factory Supply prefabricated ephathekayo Isitsha Hous ...
K Model Camping Prefab Mobile Ezezindlu Livi Yesikhashana ...
Indlu Yekamu Labasebenzi Base-Oyili Negesi
I-Flat Pack Container House kanye nekamu labasebenzi
Ikamu Lezabasebenzi Elihlanganisiwe
Indlu Yabasebenzi Yasendlini Eyenzelwe Abantu Indawo yokuhlala ...
Flat Pack Modular ezithathekayo futhi Easy Ukufakwa Pref ...
20FT Hlanganani Kalula Esikhashana Prefabricated Ucingo ...
Modular House Isitsha House ephathekayo Office lishe laba ngumlotha ...
China Steel Uzimele prefabricated Steel Sakhiwo Buil ...
Khanyisa Steel Uzimele Isakhiwo Izindleko Phansi indlu prefabricated
lishe laba ngumlotha ephathekayo Modular ephathekayo ukupakisha ukusonga c ...
Flat iphakethe isitsha indlu senziwa ngensimbi Uhlaka isakhiwo, okuyinto usebenzisa abandayo ifomu lashukumisa steel. Isakhiwo siqukethe izingxenye ezintathu ze-modular: uphahla lwophahla, ikholomu lekhoneni nohlaka lwaphansi.
Ingxenye ngayinye yemodyuli yenziwa efektri futhi yahlangana endaweni yokwakha. Ngendlu eyodwa yesitsha njengeyunithi eyisisekelo, ingahlanganiswa ngokuvundlile noma ngokuma ngendlela ehlukile njengamabhulokhi wokwakha.
Indlu yesiqukathi seflethi flat ingafakwa emafulethini amathathu ngokuguquguquka kokuhlelwa kwesikhala nokusebenza okuningi, futhi kungasetshenziswa emikhakheni ehlukile yohlelo lokusebenza.
I-20FT Hlanganisa Kalula Isikhashana Esenziwe ngaphambilini Sesimanje Esingumgogodla Wensimbi Flat Pack Container Prefab House for Office
Indlu yamakhonteyina amafulethi e-LIDA ifaneleke kahle ukuba kwakhiwe izindawo zokwakha, izinkambu zokwakha kanye nezindawo zokumba, lapho zizophendulwa kahle zibe ngamahhovisi, izindawo zokuhlala, amakamelo okushintsha nezindlu zangasese.
I-LIDA flat pack container house yenziwe ngezinto zemvelo futhi icishe ibe ngu-100% kabusha. Banikeza izinzuzo ezinkulu zemvelo (ukwahlukanisa okushisayo, ukunciphisa umsindo) ukwethula isixazululo se-modular esiguquguqukayo, esinemisebenzi ehlukahlukene, futhi esimeme